Avy Niady Ho An’ny Hafa, Inona No Mitranga Rehefa Mody An-tanindrazana Ireo Teratany Avy Ao Monténégro? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Novambra 2017 7:38 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Türkçe, Español, Italiano, Português, عربي, polski, Ελληνικά, українська, English
Pikantsary avy amin'ny dika natao ho an'ny aterineto tamin'ilay sarimihetsika “Ny Làlana Mody?” an'ny Ivontoerana hoan'ny Tetezamita Demaokratika (CDT), Montenegro.
Milica Bogdanović, mpanoratra ity lahatsoratra ity, dia mpikambana iray avy ao amin'ny Ivontoerana ho an'ny Tetezamita Demaokratika – Center for Democratic Transition (CDT), ilay fikambanana namokatra ny sarimihetsika voalaza etsy ambony.
Dinihana ao anatin'ilay sarimihetsika fanadihadiana “Ny Làlana Mody?” ny lohahevitra momba ireo teratany avy ao Montenegro sy Balkàna izay miverina mody sy miatrika fanamelohana taorian'ny nandraisany anjara tamin'ny ady tany ivelany ho an'ireo firenena hafa toa an'i Siria sy Okraina.
Ilay sarimihetsika, novokarin'ny Center for Democratic Transition (CDT), fikambanana iray tsy miankina amin'ny fanjakàna, dia afaka nojifaina nanomboka tamin'ity herinandro ity, nampitombo ny fijerena azy noho ny nanatsofohana dika amin'ny teny anglisy taminy. Asehony ny fiainan'ireo mpiadin'ny ISIS tafaverina any Montenegro sy ny anjara andraikitr'ireo andrimpanjakàna ao anatin'ny zotra ho fanakanana ny radikalisma:
Ao Montenegro, firenena iray misy olona 623.000, mihoatra ny 20 ireo olona fantatra ho nandray anjara tamin'ny ady tao Siria, Okraina ary Iràka. Tsy misy tombana ofisialy momba ireo niverina nody, saingy asehon'ny fikarohana teny an-kianja fa marobe ireo mpiady no niverina nody. Ny Tatitry ny Firaisambe Eoropeana ho an'ny taona 2016 momba an'i Montenegro dia nanamarika hoe :
Ilaina ampiakarina ny fahatsarovantenan'ny andrimpanjakàna mba hanarahana maso akaiky ny mety hisian'ny rahona mitatao ateraky ny mpampihorohoro, isan'izany ireo teratany avy ao Montenegro tratry ny radikalisma ka niverina avy any an'ady. Misy porofo ny fisian'ny olona eo amin'ny roapolo eo niady tany Siria hatramin'ny nanombohan'ny fifandonana, ary dimy tamin'ireo no voalaza fa namoy ny ainy. Mila hamafisina ny hetsika fiarovana amin'io sehatra io, ary apetraka ireo fepetra hanoherana ny radikalisma. Mila atsangana ny fanaovana tombana ireo filàna tohana ara-bola eo amin'ny sehatry ny asa fampihorohoroana.
Toy ireo firenena hafa ao Balkàna, nandany lalàna vaovao i Montenegro, lalàna mametraka ho heloka bevava ny “fanatevenana laharana na fandraisana anjara” anatinà tafika vahiny, polisy, hery ivelan'ny tafika na vondrona ivelan'ny polisy, mety hisaziana enina volana hatramin'ny 10 taona an-tranomaizina. Olona roa monja no nohenjehina noho ny fifandraisany tamin'ny resaka radikalisma, fanangonana olona, fanohanana ary famatsiana vola asa fampihorohoroana na fiadiana tany Siria sy Okraina.
Omen'ilay fanadihadiana ny topimaso momba ireo Miozlmana Sionita sy Kristiana Ortodoksa mpiady milaza fa miady ny ady tsara mba hiarovana “ireo rahalahi voaporitra” any amin'reo firenena lavitra. Ny filazàna tahàka izany dia mifanohitra amin'ny filazàn'ireo mpitarika fivavahana ao an-toerana, izay manameloka mafy, amin'ny anaran'ny finoana na noho ny “fifamatoram-pirahalahiana”, ny endrika heloka rehetra.
Hita ao anatin'ilay sarimihesika ny tafatafa nifanovana tamin'ireo mpikatroka avy amin'ny fiarahamonina sivily, mpandalina ary koa psikology, manondro ireo fomba fijery samihafan'ireo mpiady mandeha mamonjy ny kianjan'ady araka ny finoana arahan'izy ireo. Asian'izy ireo tsindrimpeo ihany koa ny hoe misy singa hafa manosika ny fanapahankevitr'izy ireo hanatevina laharana ny tolona iray heverin-dry zareo ho ‘feno herimpo”, singa toy ny olana ara-pianakaviana, aretin-tsaina, ary ny toebola nisy ny tsirairay. Mamaritra ny maha-avy ao Montenegro ihany koa ny fahatsapana voninahitra manokana, fahasahiana, ary ny rendrarendram-pomba. Marihan'ireo psykology ihany koa hoe mety hahasarika ireo olona izay mety efa niharan'ny dona tany alohaloha tany teo amin'ny fiainany ary manindrahindra ny herisetra ny fanatevenana laharana ny ady iray.
Ireo antontan-kevitra ofisialy an'ny fanjakàna dia mampiseho fa raisina ho toy ny loza mananontanona ny filaminam-pirenena sy ny fiarahamonina manontolo ny fiverenan'ireo mpiady avy any ivelany, saingy ireo andrimpanjakana ao Montenegro dia tsy mbola nahaforona fandaharanasa ho fanesorana ny fironana amin'ny radikalisma taorian'ny fidirana am-ponja.
Mahazatra ny mahita hoe manangona angondrakitra momba ireo mpiady nody avy any ivelany ary manaraka ny zavatra ataon'izy ireny ireo sampandraharaha misahana ny filaminana , saingy ireo andrim-panjakana hafa kosa tsy mametraka fandaharanasa fanohanana mba hikarakaràna ny fianakaviana sy ny zanak'izy ireny, na hanolorana fomba hisorohana ny tsy hiverenan'izy ireny amin'ny radikalisma indray:
Inona no anjara asan'ny fiarahamonina ao anatin'ny ady atao amin'ny fanaovana an-tendrony feno herisetra? #PoliticsMN
Ny 24 Oktobra no navoakan'ny CTD voalohany tao amin'ny fahitalavitra nasionaly Vijesti ilay sarimihetsika, ary nikarakarany fandefasana azy tao Podgorica, renivohitra, tamin'ny 31 Oktobra, niteraka resabe teny amin'ny vahoaka, tamin'ny fanairana ny sain'ireo mpanao politika hatrizay tao Montenegro.
Nandritra ny hetsika, nobitsihan'ny CDT nivantana ny fanamarihan'ireo mpandray anjara nampiasa ny tenifototra #PolitikaCG (#PoliticsMN), manomboka amin'ny minisitry ny atitany ao Montenegro, Melvudin Nuhodžić, hatramin'ireo mpandray fitenenana avy amin'ireo fikambanana fiarahamonina sivily izay nizara voka-pikarohana manandanja :
Nuhodžić: Trangan-javatra iray saro-bahàna ny fanaovana an-tendrony feno herisetra, ary fanamby iray ilàna fampivondronana ny ezaka avy amintsika rehetra. #PoliticsMN
Elvira Hadžibegović-Bubanja avy ao amin'ny Forum MNE: Heverin'ny tanora fa manamarina ny fiarovana ny finoana ny fampiasàna herisetra.
Aner Zuković avy amin'ny Atlantic Initiative [ONG Bosniaka]: mitàna anjara toerana lehibe amin'ny fanapariahana ireo hevitra radikaly ny aterineto. Nampiasaina handraisana ireo vaovao mpanaraka azy…
Raha misy tokoa finiavana politika any amin'ny sehatra faratampony mba hampitombo ny anjara toeran'ny vondom-piarahamonina amin'ny ady hanoherana ny fanaovana an-tendrony feno herisetra, vao avy nanomboka nametraka rafitra iray tahàka izany indrindra i Montenegro. Ankoatry ny fampidirana am-ponja sy ny fanarahana maso, raha resaka fiverenana indray hiditra anaty fiarahamonina ao Montenegro, dia miasa irery ireo mpiady fahiny tany ivelany sy ny fianakavian'izy..
Nambaran'ny minisitra Nuhodžić ny famoronana ny Sehatra Nasionaly ho Fanoherana ny Fanaovana An-Tedrony Feno Herisetra, saingy mbola betsaka ireo andrim-panjakana no tsy tonga saina amin'ny anjara toeran'izy ireo ao anatin'io. Tsy maintsy apetraky ny fiarahamonina sivily ny fomba fanao mahay manavaka tsara mba hanakanana ny fiparitahan'ireo hevitra radikaly ety anaty aterineto sy amin'ny alàlan'ny media, ary hanampy ireo mpiady fahiny tany ivelany mba hiverina handinika ny rafitry ny soatoavin-dry zareo.